Muuri News Network » SAWIRO: Shaqsi Cusub oo qarka u saaran in uu noqdo Taliyaha Nabad-sugida DF….
SAWIRO: Shaqsi Cusub oo qarka u saaran in uu noqdo Taliyaha Nabad-sugida DF….
Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa habeenkii 8-da Janaayo 2018 u dabaadegtay sanadguuradii 48-aad ee aasaaskeeda.
Xaflad lagu qabtay taliska dhexe Hay’adda NISA ee magaalada Muqdisho oo ay ka qeyb galeen madaxda ay ka mid yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari), Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xasan Cali Kheyre, Wasiirka Amniga Gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale, taliyeyaashii hore ee NISA iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay ayaan saxaafadda loo bandhigin waxaana warka la shaaciyay 48 saacadood kadib xafladda.
Waxaa xusid mudan in ku-simaha Taliyaha ahna taliye ku xigeenka NISA C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo si weyn isugu soo bandhigay xafladda sanadguurada 48-aad ee NISA, wuxuuna si weyn uga dhex muuqday warkii ay baahisay warbaahina ee xuska ku saabsnaa oo isaga dartiis loo diyaariyey.
C/qaadir Maxamed Nuur Jaamac oo hore u ahaa xoghayaha safaaradda Soomaalida ee Turkiga intii aan loo magacaabin ku xigeenka NISA, ayaa isku shaadheyn kale ku noqday kusimaha NISA, waxaana la ogyahay inuu hadda yahay musharax u taagan inuu noqdo agaasimaha NISA, iyadoo ololihiisa uu ka dhex muuqdo warbaahinta dowlada.